Home News Warar kala duwan oo ka soo baxaya Qarax ka dhacay Gobolka Baay
Warar kala duwan oo ka soo baxaya Qarax ka dhacay Gobolka Baay
Wararka laga helayo degmada Qansax-dheere ee Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya qarax lagula eegtay Gudaha degmadas,kaas oo sababey khasaaro kala duwan.
Qaraxa oo ahaa miinada noocad dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa uu ka dhacay afaafka hore ee Saldhig Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Maamulka koonfur Galbeed ku leeyihiin degmadaas,kadib markii mid kamid ah Gaadiidka ciidamada Itoobiya qaraxaasi lala eegtay.
Inta la xaqiijiyey qaarxaas ayaa waxaa ku geeriyoodey laba askari oo ka kala tirsanaa Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Koonfur Galbeed,sida ay sheegeen dad ku sugan degmada Qansax-dheere.
Al-Shabaab oo qaraxaasi ka hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dileen labada Askari,balse aysan bixin faah faahin intaasi ka dheer.
Ciidamada Itoobiyanka ah ee qaraxa lala eegtay ayaa waxaa ay fureen rasaas farabadan taas oo ana wax khasaaro ah geysan,waxaana la soo sheegayaa in xaalada haatan ay tahay mid degam.